Maydadka 29 ruux oo la geeyay Isbitaal Madiina – warqaat.com Information About Somali New's Today
HomeWARARKA MAANTAMaydadka 29 ruux oo la geeyay Isbitaal Madiina
Maydadka 29 ruux oo la geeyay Isbitaal Madiina
February 24, 2018 Cabdi nuur WARARKA MAANTA 0
Maamulka Isbitaalka Madiina ee Magaalada Muqdisho, ayaa Saxaafadda u sheegay 29 ruux oo maydad ah in la geeyay Isbitaalka Madiina, kuwaasi oo ku dhintay qaraxyadii iyo Israsaaseyntii xalay ka dhacday magaalada.
Madaxa Caafimaadka Isbitaal Madiina C/qaadir Xuseen Maxamed ayaa u sheegay Warbaahinta in maydadka 29 qof oo laba ka mid ah ay Isbitaalka ku dhinteen la geeyay halka dhaawaca hadda ku jira uu gaarayo 11 Qof.
Wuxuu sheegay dadka qaarkood maydadkooda in la garan waayay oo ay gubteen, maadaama qaraxa gaariga uu si aad ah u saameeyay, islamarkaana rag iyo dumar waxa ay yihiin la kala saari waayay.
Maamulka Isbitaalka Madiina, ayaa sheegay in dadka dhaawacyada ah xaaladooda caafimaad ay la tacaalayaan, islamarkaana ay rajeynayaan inay soo caafimaadaan.
Maydka Isbitaalka la gaarsiiyay, ayaa qaarkood waxa ay ahaayeen askar ka tirsanaa ciidamada Xoogga dalka Somaliya iyo Al Shabaabkii weerarka soo qaaday.
Isbitaalka Madiina ayaa lagu arkayaa ehelada dadkii dhintay iyo kuwa dhaawaca ah oo Isbitaalka buux dhaafiyay.
WAR DEG DEG AH: Itoobiya oo wafdi wasiiro ah u soo dirtay Somaliland, maxayse ka wada hadlayaan?
Dhageyso:-Maxay Ka Wada Hadleen Duqa Muqdisho Iyo Xogheyaha Dowladda Hoose Ee Turkiga?—(Daawo Sawirro)
43,845 total views, 795 views today
43,845 total views, 795 views today War ka soo baxay Hay’ada Nabadsugida iyo Sirdoonka Qarank ayaa waxaa lagu sheegay in Ciidamada Amniga ay Gacanta ku dhigeen Maxkaxdii ka dambeeyasay weerarkii dadka badan ku dhinteen ee lagu qaaday […]
43,917 total views, 795 views today
43,917 total views, 795 views today Wasaaradda Arrimaha Dastuurka ee Xukuumadda Federaalka ah ee Soomaaliya ayaa maanta qabatay munaasabad lagu daahfurayay Barnaamijka Carabiyaynta Dastuurka KMG ah oo ay ka soo qeybgaleen Wasiir Ku-Xigeenka Arrimaha Dastuurka iyo Safiirka […]
43,931 total views, 795 views today
43,931 total views, 795 views today Wareegto ka soo baxay Xafiiska Madaxweynaha Dowlad-goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam(Madoobe) ayaa Maanta oo Khamiis ah waxaa lagu Magacaabay Hanti dhowraha guud ee Jubbaland Wareegtada ayaa waxaa Hanti dhowrahaGuud ee Jubbaland […]
43,953 total views, 795 views today
43,953 total views, 795 views today Kulan socday in ka badan sideed saacadood ayaa waxa uu Turkiga ku dhexmaray Mas’uuliyiin uu horkacayay Wasiirka Gaadiidka iyo Duulista Soomaaliya Maaxamed Cabdullaahi Salaad(Omaar) iyo Mas’uuliyiinta Shirkadda Favori ee Maamusha Garoonka […]
43,988 total views, 797 views today
43,988 total views, 797 views today Taliye ku xigeenka Ciidamada Booliska Dowlad Goboleedka Galmudug Col, Cabdi Jaamac Cabdulle ayaa shaaciyay in kadib baaritaano ay sameeyeen ay heleen halkii laga soo abaabulay weerarkii lagu qaaday Xarun uu Gaalkacyo […]